Umphakathi waseMalende ubhikishele ababoshiwe | News24
Umphakathi waseMalende ubhikishele ababoshiwe
KUBHIKISHE umphakathi waseMalende ngoLwesihlanu oledlule ngemuva kokuthi amaphoyisa abophe amanye amalungu awo asolelwa ekuthintekeni esigamekweni sokushaywa kwababe solelwa ubugebengu ngonyaka odlule.
Ikhansela, uNkk Nomonde Mthethwa uthe ngemuva kokushaywa kwalabo ababesolelwa ubugebengu ngonyaka odlule kukhona amalungu omphakathi ayisishiyagalolunye aboshelwa leso sigameko. Uthe laba bakhishwa ngebheyili ka-R1000.
Uqhube wathi ngoLwesine oledlule amaphoyisa aqale phansi ngokubopha amanye amalungu omphakathi asolelwa ukuba yingxenye yalesi sigameko.
Uthe: “Kunamahemuhemu emphakathini okuthi amaphoyisa enze uhla lwabantu okumele beboshwe. Into ebuhlungu ukuthi kunemibiko evelile yokuthi kukhona amaphoyisa ahlukemeze abantu abamsulwa,” kusho uNkk Mthethwa.
Uthe noma engakugqugquzeli lokhu okwenziwe amaphoyisa kodwa lokho akusho ukuthi uyakugqugquzela ukuthi umphakathi ushaye abantu abasolelwa ubugebengu.
Uthe: “Ingizwisa ubuhlungu lento eyenziwe amaphoyisa kodwa futhi ngiyazwelana nemndeni yalabo abalahlekelwa yimphefumulo yabo ngemuva kokushaywa umphakathi,” kusho uNkk Mthethwa.
Uqhube wathi kubikwa ukuthi kukhona owesifazane oshaywe umseshi kodwa uyasaba ukuvula icala ngoba uthi amaphoyisa azomuhlukumeza.
NgoMsombuluko uNkk Mthethwa ubese nkantolo yeMantshi yaKwaDukuza lapho obekulindeleke ukuthi kuvele amalungu omphakathi waseMalende amane aboshwe ngeledlule.
UNkk Mthethwa uthe: “Baboshelwe amacala okuzama ukubulala kanye nokubulala. Bazofaka isicelo sebheyili ngomhlaka 20 kuMasingana (January),” kusho yena.
U-Colonel Mdumiseni Nene, wasemaphoyiseni aKwaDukuza uthe kumele umphakathi waseMalende ukuqonde ukuthi uma kukhona umuntu olahlekelwe umphefumulo wakhe ngendlela engaqondakali kumele amaphoyisa enze uphenyo.
Uqhube wathi okunye okubalulekile okumele abantu bekwazi ukuthi akumele bephazamise umsebenzi wamaphoyisa ngokuthi beshaye abantu abasolelwa ubugebengu.
U-Colonel Nene unxuse abantu abanezikhalazo ngendlela amaphoyisa abaphatha ngayo ukuthi bevule amacala emaphoyiseni.